Macallin Sam Allardyce oo ku dhawaaqay kabtanka hoggaamin doona xulka qaranka Ingiriiska… (Kumaa gacanta loo galiyey calaamadda hoggaaminta?) – Gool FM
Macallin Sam Allardyce oo ku dhawaaqay kabtanka hoggaamin doona xulka qaranka Ingiriiska… (Kumaa gacanta loo galiyey calaamadda hoggaaminta?)
Haaruun August 30, 2016
(London) 30 Agoosto 2016 – Sida uu xaqiijiyey macallinka xulka qaranka Saddexda Libaax ee Sam Allardyce Wayne Rooney ayaa sii hayn doona doorka kabatannimo ee qaranka Ingiriiska.
Xiddiga kooxda Machester United ayaa kabtan u ahaa xulka qaranka Ingiriiska tan iyo sanadkii 2014-kii, markaasoo uu calaamadda hoggaaminta kala wareegay laacibkii hore ee Liverpool Steven Gerrard.
Macalin Sam Allardyce ayaana ku dhawaaqay inuusan wax bedel ah ku samayn doonin kabtanka xulka Ingiriiska, marka uu kulankiisa ugu horreeya xulka saddexda libaax hoggaamin doono bisha soo aaddan ee September.
“Wayne waa uu ku wanaagsan yahay kabtannimada Ingiriiska, taasoo habka ay wax u dhacayaan ka yeeshay inay rumowdo, waxaana ay doorka ka yeeshay inay go’aanka sahlan iiga dhigto inuu iska sii wato” ayuu tababaraha Ingiriisku u sheegay TheFA.com.
“Wayne waa rikoodh jabiye nafsaddiisa ah, waa xubinta ugu sarreysa shaxda, isaga si wayn ayaa looga ixtiraamaa jiilkiisa.”
“Dhammaan arrimahaas dhiniciisa ah waxay tilmaamayaan doorashada saxda ah inuu hoggaamiyo xulka.”
Iyadoo 115 kulan uu u saftay xulka England, Rooney inkastoo uu safashadaas la wadaago David Beckham, haddana waa ciyaaryahanka labaad ugu safarashada badan xulka saddexda libaax taariikhada.
Waxa uu sidoo kale dhaliyey 53 gool isagoo ah gooldhaliyaha ugu sareeya taariikhada xulka qaranka Ingiriiska, Waxaana uu dhaafay oo ka dambeeyey xiddigihii rikoodhkaas haystay ee Bobby Charlton iyo Gary Lineker.
Sergio Aguero oo maanta sugaya inuu kala ogaado in laga ganaaxay ama inuu ciyaarayo kulanka Manchester Derby
DAAWO MUUQAALKA: Tababarkii ugu horreeyey ee Thierry Henry uu la sameeyey xulka Belgium